Global Voices teny Malagasy » ‘Nilaza tantara mivelatra kokoa amin’ny firenenay ny nanagadrana anay’: Eritreritra avy amin’ireo bilaogeran’ny Zone9 ao Ethiopia · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 27 Oktobra 2015 7:20 GMT 1	 · Mpanoratra Zone9 Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Etiopia, Fahalalahàna miteny, Fanampenam-bava, Mediam-bahoaka, Zon'olombelona, GV Mpisolovava
Blaogeran'ny Zone9, fiarahana taorian'ny famotsorana azy ireo. Saripikan'ny pejy Facebook Zone9.
Taorian'ny fanafahana madiodio sy ny famoahana azy ireo hivoaka ny fonja, mieritreritra ny zava-niainany ny blaogeran'ny Zone9 ao Ethiopia  ary mankasitraka ny mpanohana azy ireo. Nosamborina tamin'ny avrily 2014 ireo blaogera ireo ary notsaraina eo ambanin'ny lalànan'i Ethiopia miady amin'ny fampihorohoroana. Navotsotra tamin'ny jolay 2015 ny dimy amin'ireo mpikambana ary noafahana madiodio sy navotsotra tamin'ny herinandron'ny 19 oktobra 2015 ny efatra ambiny. Fantaro bebe kokoa  ny raharaha momba azy ireo.
Ity lahatsoratra ity dia niarahan'ny Zone9  nosoratana ary nadikan'i Endalk Chala  avy amin'ny teny Amharika ho amin'ny teny anglisy.
Nahatalanjona toy ny tamin'ny nitazonana anay ny famotsorana anay. Navotsotra ny dimy aminay rehefa “nosintonina” ny fiampangana anay tamin'ny Jolay. Ny efatra ambiny taminay dia navotsotra tamin'ny Oktobra satria noafahana madiodio izahay (avotra tamin'ny fampakarana amin'ny fitsarana ambony noho ny fanafahana anay madiodio). Eny fa na dia mbola afaka noho ny fandoavana onitra fanafahana vonjimaika aza ny iray aminay, Befeqadu, ary tsy maintsy mbola hiaro ny tenany amin'ny volana desambra amin'ity taona ity. Na dia noahafana noho ny antony samihafa aza izahay, zavatra iray no mahatonga anay ho mitovy – ny finoana matanjaka ao aminay fa tsy mendrika ny hogadraina na dia iray andro monja aza izahay.
Eny, tsara ny afaka tamin'ny famonjana, saingy tsy mendrika ny nosamborina izahay. Ny hany nataonay dia ny manoratra sy miezaka mafy hampanjaka ny fanjakana tan-dalàna satria tianay ny hahita ny fivoaran'ny firenenay sy ny fiainan'ny olompirenena ao aminy. Saingy nisamborana sy nanagadrana, nanatohintohinina sy nampijaliana ary nanaovana anay ho sesintany ny nanoratra sy nanonofinofy hoavy tsara kokoa ho an'ny firenenay. Tsy mendrika izany izahay.
…nisamborana sy nanagadrana, nanatohintohinina sy nampijaliana ary nanaovana anay ho sesintany ny nanoratra sy nanonofinofy hoavy tsara kokoa ho an'ny firenenay. Tsy mendrika izany izahay
Mahafaly anay ny mahare olona miteny fa nahazo aingam-panahy tamin'ny tantaranay ry zareo. Saingy mampalahelo anay ihany koa ny mahafantatra fa matahotra ny hanoratra ry zareo satria hitan-dry zareo ny lalana nodiavinay tamin'ny fanoratanay. Sady mahatonga hiaina hafaliana no mahatonga hiaina alahelo ny nanagadrana anay. Ny fototra ijoroana dia hoe tsara ny mahafantatra fa nanome aingam-panahy olona izahay nefa mampalahelo fa lasa tsy mahasahy miresaka ampahibemaso ny olona vokatry ny nitazonana anay. Mampalahelo ny mahafantatra fa niteraka vokatra masiaka amin'ny lahateny ampahibemaso ataon'ny olona ny nanagadrana anay.
Lasibatry ny tsy fahaiza-mitondra tena tafapaka lalina izahay. Saingy tsy mitoetra ivelan'ny fahafahanay hamela heloka izany. Ho an'ireo nanagadra anay izay nanome anay ireny fitsapana ireny, na tsy mangataka famelan-keloka aminay aza ianareo, indreto izahay.
Ny nanagadrana anay dia mahatonga anay hahatsapa fa verivery foana ny andronay. Marina fa betsaka ny zavatra very sy tsy hitanay. Saingy nampakatra ny fahazoanay zavatra ihany koa izany. Nianatra zavatra maro izahay. Nilaza tantara mivelatra kokoa amin'ny firenenay ny nanagadrana anay. Afa-nahita maso ny vidin'ny fahafaha-miteny ho tena lafo dia lafo izahay. Vavolombelona voalohany nanatri-maso ny tsy rariny izahay. Mihoatra noho ny zavatra hafa rehetra, nianaranay fa ny firenena mandady amin'ny tsy rarin no fahavalo voalohany indrindra amin'ny fankatoavan'ny olom-pirenena ny lalàna.
Lasibatry ny tsy fahaiza-mitondra tena tafapaka lalina izahay. Saingy tsy mitoetra ivelan'ny fahafahanay hamela heloka izany. Ho an'ireo nanagadra anay izay nanome anay ireny fitsapana ireny, na tsy mangataka famelan-keloka aminay aza ianareo, indreto izahay. Ary miangavy izahay avelao ny helokay fa olompirenena mpanaja lalàna mitsipaka ny hiaina [amin'izay teneninareo izahay].
Ho anareo rehetra izahy niaraka taminay na tamin'ny andro ratsy na tamin'ny andro tsara, ianareo izay nijoro teo anilanay tsy tamin'ny fahombiazanay fa tamin'ny tsy nahombiazahay ihany koa, mahafinaritra IANAREO! Ianareo no namanay, ianareo no fianakavianay, ianareo no mpisolovavanay; nanao fanentanana ho anareo izahay, ary niaro anay sy ny fotokevitray. Misaotra anareo ry fikambanana mpampita vaovao, vondrona mpiaro ny zo sy ny fikambanana manontolo izay naneho firaisankina sy fiahiana ny hevitray. Mankasitraka anareo! Mendrika ny fankasitrahana feno avy amin'ny fonay ianareonoho ny hetsika nataonareo hanafohy ny andro nigadranay tao am-ponja sy nanao izay nampalefaka ny marikivy niainanay raha tany am-ponja izahay.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/10/27/75934/
 blaogeran'ny Zone9 ao Ethiopia: https://advox.globalvoices.org/behind-bars-in-ethiopia-campaign-to-free-the-zone9-bloggers/